December 3, 2020 - Achawlaymyar
သင်ချစ်တာထက် ပိုချစ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင် ဒါမျိုးတွေ ကြုံရမှာပါ……
December 3, 2020 by Achawlaymyar
သင်ချစ်တာထက် ပိုချစ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင် ဒါမျိုးတွေ ကြုံရမှာပါ လူတိုင်းက ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အချစ်ဆုံးတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ချစ်သူနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က အမြဲတမ်းပိုချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကလည်း ချစ်သူတွေကို အမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွေးတွေက သင့်ကိုလည်း ဖိစီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကလည်း သင်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်မှာ ဘယ်သူကပိုချစ်လဲ ဆိုတာကို သိချင်နေမှာပေါ့။ ဒါဆို သင့်ချစ်သူက သင်သူ့ကိုချစ်တာထက် ပိုတဲ့အချစ်တွေနဲ့ ချစ်နေမှန်း ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်နော်။ (၁) သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားက ပြဿနာတွေကို မကြီးထွားစေဘူး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ချစ်သူနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ သူဟာ ပြဿနာတွေပိုကြီးထွားစေမယ့်စကားတွေ မပြောတတ်သလို၊ ပြဿနာပိုကြီးမယ့် လုပ်ရပ်တွေလည်းမလုပ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါက သူဟာ ပြဿနာဖြစ်မှာကိုကြောက်တာထက် သင်နဲ့သူ့ကြားမှာ အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တာကို မလိုလားလို့ ၊ မကြိုက်လို့ပါ။ (၂) သင်က ပထမဦးစားပေး ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာ၊ ဘာကိစ္စနဲ့ပဲကြုံကြုံ … Read more
လာမယျ့ (၂၀၂၁)ခုနှဈ မှာ ရာသီခှငျပျေါမူတညျပွီး လမျးခှဲရနိုငျခွရှေိတဲ့ စုံတှဲ (၄) တှဲ
နှဈတဈနှဈရဲ့ နောကျဆုံးလဖွဈတဲ့ ဒီဇငျဘာလကို ရောကျလာခဲ့ပါပွီနျော။ နှဈသဈဆိုတာကို လူတိုငျးက မြှျောလငျ့တတျကွပွီး နှဈသဈမှာ ဘယျလို အလှညျ့အပွောငျးတှေ၊ ဘယျလိုကံအပွောငျးအလဲတှေ တှဆေုံ့ရမယျဆိုတာကို လူတိုငျး သိခငျြတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လာမယျ့ (၂၀၂၁)ခုနှဈ မှာတော့ ရာသီခှငျပျေါမူတညျပွီး လမျးခှဲပွတျစဲသှားနိုငျခွရှေိတဲ့ စုံတှဲတဈခြို့ ရှိလို့နပေါတယျ။ ဘယျစုံတှဲတှကေ ဘယျလိုသတိထားဖို့လိုအပျလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ Taurus and Sagittarius ဒီရာသီခှငျစုံတှဲကတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ရငျ့သီးတဲ့ စကားလုံးတှပွေောမိတာကွောငျ့ပဲ လမျးခှဲရတဲ့အထိ ဖွဈသှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ စကားလုံးတှနေဲ့ တိုကျခိုကျတာမြိုးတှကေို သတိထားဖို့ လိုအပပျပါတယျနျော။ နောကျပွီး Taurus ရာသီခှငျတှကေ Sagittarius တှရေဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှကေို သိပျသဘောကလြမေ့ရှိတတျကွတဲ့အတှကျလညျး ပွသနာဖွဈပျေါတတျတာဖွဈလို့ ဒီအခကျြလေးတှကေ လမျးခှဲတာအထိ ဖွဈသှားစနေိုငျပါတယျ။ Sponsored တဈခါတဈလမှော Genini ရာသီခှငျတှရေဲ့ … Read more
နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ချစ်သူတွေဆိုတာကတော့ ဒီလိုလေးတွေပါ…
နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ချစ်သူတွေဆိုတာကတော့ ဒီလိုလေးတွေပါ သိပ်ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း နေလို့ မရပါဘူး။ ချစ်တဲ့ချစ်သူလေး အနားမှာပဲ နေပြီး ချစ်သူလေး ပျော်နေအောင်ပဲ လုပ်ပေးချင်နေတာမျိုးပါ။ စိတ်ချင်းပါ ဆက်နေမယ့် ချစ်သူလေး ချစ်သူတိုင်းကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့ စွယ်တော်ရွက်ကလေးလို့ နှစ်လွှာပေါင်းတစ်ရွက်ပဲ ဖြစ်ချင်မှာပါ။ အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေကြားမှာကတော့ တစ်ယောက် မရှိရင် ကျန်တစ်ယောက်က အဆင်မပြေတာမျိုးကတော့ အလိုလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အခု Marry ပြောပြပေးချင်တာကတော့ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ချစ်သူတွေကြားထဲမှာ ခံစားရမယ့်အရာလေးတွေ အကြောင်းပါ။ ချစ်သူလေးနဲ့ ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုလေးတွေ ခံစားနေရမလဲ ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြထားပါတယ်နော်။ စိတ်ချင်းဆက်နေတယ် ချစ်သူတွေကြားက စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်မှု ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ချစ်သူတွေဆိုတာ တစ်ယောက်ရှိမှ ကျန်တစ်ယောက်က ပြည့်စုံသွားရတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်က … Read more
December ဆိုတာနဲ့ အေးစိမျ့စိမျ့ရာသီဥတုလေးရယျ Christmas ရယျ New Year ရယျက အထငျကရတှပေါပဲ။ အခုပွောပွမှာကတော့ နှဈတဈနှဈရဲ့ နောကျဆုံးလလဲ ဖွဈတဲ့ December Born လေးတှရေဲ့ အကငျြ့စရိုကျလေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ (၁)December Born လေးတှကေ မှေးရာပါ ဆရာကွီးတှပေဲနျော။ သူတို့သိထားတဲ့ ဗဟုသုတတှေ၊ အကွောငျးအရာတှကေို ဝမြှေပေးဖို့ ဝနျမလေးသလို အရမျးကို ကူညီတကျကွပါတယျ။ လူတှရေဲ့ အကောငျးဆုံးတှပေဲ မွငျတကျပွီး အမွဲလိုအပျတိုငျး အဆငျသငျ့ရှိတကျကွပါတယျ။ (၂)အရိုးသားဆုံးလူတှကေို December မှာမှေးတယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ကောကျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။ လိမျတာညာတာတှေ၊ မဟုတျမမှနျပွောတာတှကေို အရမျးမုနျးပွီး ဘယျနရောမှာမဆို မှနျမှနျကနျကနျပဲ နတေကျကွပါတယျနျော။ (၃)ပှဲတိုငျးကြျောလေးတှကေလဲ December Born လေးတှနေျော။ ကပှဲတှေ၊ အားကစားတှေ၊ ပရဟိတတှမှော အမွဲတကျတကျကွှကွှနဲ့ စိတျရောကိုယျပါ … Read more
ဆောင်းတွင်းမှာ ဗောက်ပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းနည်းလေးများ….
ဗောကျထ တာဟာ သိပျကို စိတျညဈစရာကောငျးလှနျးပါတယျ။ ဆောငျးရာသီမှာမှမဟုတျဘဲ ရာသီမရှေးဗောကျထတတျတဲ့သူတှလေညျးရှိပါတယျ။ တဈခြို့ကတော့ အသားအရေ ခွောကျသှလေို့ ဗောကျထကွပွီး တဈခြို့ကလညျး ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ မတညျ့တာကွောငျ့ ဗောကျထကွပါတယျ။ နှရောသီမှာ ခြှေးထှကျမြားပွီး ဦးရပွေားယားယံကာ ဗောကျထကွပါတယျ။ ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ မတညျ့တာမြိုးဆိုရငျတော့ ခေါငျးလြှျောရညျကို ပွောငျးသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဈေးကှကျထဲမှာ ရရှိနတေဲ့ ဗောကျပြောကျ ခေါငျးလြှျောရညျတှကေ သငျနဲ့ မတညျ့ဘူးဆိုရငျတော့ သဘာဝနညျးလမျးလေးကို မြှဝပေေးပါမယျ။ ၁။ လကျဖကျဆီ (Tea Oil) ထညျ့ပါ။ သငျလြှျောမယျ့ ခေါငျးလြှျောရညျထဲ မှာ လကျဖကျဆီ ၂ စကျ ၃ စကျလောကျထညျ့ပွီး ဦးရပွေားမှာ ၁ မိနဈလောကျ နှိပျနယျပေးပါ။ ပွီးမှ ခေါငျးလြှျောပေးပါ။ တဈပတျကို ၃ ကွိမျလောကျလုပျပေးပါ။ ၁ လလောကျဆိုရငျ … Read more
ရှာစုခဲ့သမျှငွေ မိန်းမကို ယုံပြီး အပ်ခဲ့တဲ့ ယောက်ကျား ကားဝယ်တော့မယ် ဆိုမှ ရင်ကွဲပက်လက် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်
ာစုခဲ့သမျှငွေ မိန်းမကို ယုံပြီး အပ်ခဲ့တဲ့ ယောက်ကျား ကားဝယ်တော့မယ် ဆိုမှ ရင်ကွဲပက်လက် ဖြစ်ခဲ့ရ လိမ်လည်တိုင်တန်းထားသည့် အမှု နိုဝင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့ မနက် (၁)နာရီအချိန်ခန့်ကတောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်မြို့နယ်အမှုထမ်းရပ်ကွက်တွင်နေအိမ်ထဲ၌သားအမိနှစ်ယောက်ထဲရှိနေစဉ်အမည်မသိအမျိုးသား(၁)ဦးမျက်နှာကိုပုဆိုးအုပ်စည်းလျက်အရိုးအသွား(၆)လက်မခန့် ဓားဦးချွန်ကိုင်ဆောင်ကာခြိမ်းခြောက်၍ရွှေ/ငွေတန်ဖိုးခန့်(၉၄၀၀၀၀၀)ကျပ်ခန့်ယူဆောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့မနက်(၁)နာရီအချိန်ခန့်ကတရားလိုဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းသန်းဝေ(၄၇)နှစ်(ဘ)ဦးသံချောင်း သစ်တောလမ်းသွယ်(၁)၊အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နေသူသည် ၎င်း၏နေအိမ်၌ သမီးဖြစ်သူမအေးမြတ်သူ(၈)နှစ်နှင့်အတူနေအိမ်ရှေ့ခန်းတွင် – ကာတွန်ကားထိုင်ကြည့်နေစဉ်သမီးဖြစ်သူမှဗိုက်ဆာသည်ဆိုသဖြင့် အိမ်ရှေ့တံခါးဖွင့်ပြီးလက်ဆေး၍ တံခါးဂျက်အားဂျက်မထိုးပဲဟထားကာ ထမင်းကျွေးပြီးသမီးဖြစ်သူမှထမင်းစားပြီးအိပ်မည်ပြောသောကြောင့်ခြင်ထောင်ထောင်ပေးနေစဉ် နေအိမ်ရှေ့တံခါးအားတွန်းဖွင့်သံကြား၍ကြည့်လိုက်ရာနေအိမ်ထဲသို့မျက်နှာပုဆိုးဖြင့်အုပ်စည်းထားသောအမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးဝင်လာပြီး၎င်းလက်ထဲတွင်အရိုးအသွား (၆) လက်မခန့်ဓားဦးချွန်တစ်ချောင်းကိုင်ထားကာ – တရားလိုဖြစ်သူအား”ပိုက်ဆံပေး”ဟုတောင်းခံရာတရားလိုမှပိုက်ဆံမရှိကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်စဉ်”သားအမိနှစ်ယောက်လုံးသက်ပြစ်မယ်””ရှိတာထုတ်ပေးဟု”ပြောဆိုကာ ဘီဒိုသော့အားအတင်းဖွင့်ခိုင်းသဖြင့်ကြောက်​လန့်၍ဖွင့်ပေးလိုက်စဉ်ထိုသူမှဗီဒိုတွင်းထဲ့ထားသည့်အမျိုးသမီးဘေးလွယ်အိတ်တစ်လုံးအားတွေ့ရှိသွားသဖြင့် – ဖွင့်ခိုင်းရာအိတ်အတွင်းမှငွေစက္ကူရောရာ(၇၅)သိန်းကျပ် ရွှေဆွဲကြိုးအပါစုစုပေါင်းရွှေအလေးချိန်(၂)ကျပ်သား(၂)မူးကာလခန့်မှန်းတန်ဖိုး(၁၉၀၀၀၀၀)ကျပ်အားတို့အားတွေ့ရှိရသဖြင့်ယူဆောင်၍နေအိမ်ပြန်ထွက်သွားရာ​- အိမ်အပြင်ဘက်တွင်အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးစောင့်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းနှင့်ပိုက်ဆံပေးရင်ပေးမပေးရင်သက်ပြစ်မယ်ခြောက်လှန့်၍ရွှေနှင့်ငွေများတောင်းယူသွားသူအမည်မသိအမျိုးသား(၂)ဦးအားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် သန်လျင်မြို့မရဲစခန်းသို့လာရောက်တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်၊တရားလိုဖြစ်သူ၏ခင်ပွန်းဦးမိုးသူနှင့်သားဖြစ်သူမောင်ရှိုင်းကိုကိုတို့သည် ကိုဗစ် လူနာများနေထိုင်ရေးအတွက်အဆောက်အဦးအသစ်ဆောက်လုပ်ရန်ဖောင်ကြီးမြို့နယ်သို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့ကသွားရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်၊ ယခုအခါသန်လျင်မြို့မရဲစခန်းမှဖြစ်စဉ်နှင့်ပက်သက်၍(ပ)၃၀၇၅/၂၀၂၀၊ပုဒ်မ- ၃၈၆/၁၁၄ အရအမှုဖွင့်၍အမှုစစ်အဖြစ်နယ်ထိန်းအရာရှိရဲအုပ်ချမ်းမြေ့အောင်မှတရားခံအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရေးအတွက်လိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ကျော်ကျော်(သန်လျင်) Unicode ရှာစုခဲ့သမြှငှေ မိနျးမကို ယုံပွီး အပျခဲ့တဲ့ ယောကျကြား ကားဝယျတော့မယျ ဆိုမှ ရငျကှဲပကျလကျ … Read more
ခဏတော့ငိုပါ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်နုတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ဖို့ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်စိတ်နုတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ပါ အသဲကွဲတိုင်းငိုနေစရာလား ငိုမ်ိရင်ခဏပေါ့ မျက်နှာထသစ် သနပ်ခါးလိမ်းပြီးရင် စိတ်လက်ကြည်သာတဲ့နေရာကို ထသွားလိုက်မယ် နဂိုအတိုင်း အချစ်ကို ပြန်မရနိုင်မှတော့ ဘာလို့ များမျှော်လင့်တောင့်တ ငိုကြွေးနေရမှာလည်း…. လောကမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံး လူဟာ ကိုယ်ဖြစ်သင့်သလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လောက် ဘယ်သူမှ မချစ်နိုင်ပါဘူးနော်။လမ်းခွဲသွားလို့ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေစရာလား စိတ်ထိခိုက် ခံစားရရင် ခဏဆို လုံလောက်ပြီလေ ။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဆက်လုပ်ဖို့အားအင်အသစ်တွေကို အမြန်ဆုံးမွေးယူပြီး လုပ်ငန်းခွင်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေကြား ပျော်ပျော်ဘဲနေလိုက်မယ် ချန်ထားခဲ့သူထက် တစ်နေ့ သာရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်တွေကိုပိုတောင်ကြိုးစားလိုက်ရုံဘဲ ကိုယ့်ဘဝအတွက် နောက်ထပ်ရှေ့ ဆက်ရမဲ့ ခရီးရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်ဟာ … ကိုယ်သာဖြစ်နေတာမို့ကိုယ့်ကို … Read more
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျား ၄ မျိုး……
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျား ၄ မျိုး ၁။ သစ္စာမရှိတဲ့ သူမျိုး သစ္စာမရှိတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို လက်မထပ်မိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ သစ္စာမရှိတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးက သင့်ဘဝကို ဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်သလို သင့်ကိုလည်း တစ်သက်လုံး စိတ်းဒုက္ခရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ ၂။ ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျား တစ်စုံတစ်ခုကို ဖုံးကွယ်တတ်ပြီး ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေကို သတိထားပါ။ သင့် မသိအောင် အမှားတွေ လုပ်ထားပြီး ဟန်ဆောင်ကောင်းစွာ သင့် အနားမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ၃။ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်တွေကို စွဲလန်းနေသူ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်တွေကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စွဲလန်းနေတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို ဝေးဝေးကနေ ရှောင်ပါ။ သူတို့ဟာ သင့် ထက်ပိုပြီး ထိုအရာတွေကို နှစ်သက်တဲ့ အတွက် စိတ်ဆင်းရဲ ရနိုင်ပါတယ်။ … Read more